Iphepha lolwazi "i-ART bee HIVE" isicelo sokuhlanganisa kunye nokunikezelwa ngolwazi | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi
KwiPhepha loLwazi lweNkcubeko yeWadi yeOta "i-ART bee HIVE" epapashwe nguMbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi, intatheli yewadi "iMitsubachi Corps" iya kugubungela imisebenzi yenkcubeko kunye nezobugcisa!
Nceda usithumelele izicelo zokugubungela okanye ulwazi ngemisebenzi enxulumene nenkcubeko kunye nezobugcisa, ezinje ngeminyhadala yobugcisa, imisebenzi yokunyusa ubugcisa, kunye neendawo zobugcisa.
Malunga ne "ART bee HIVE"
Iphepha lolwazi lekota eliqulathe ulwazi malunga nenkcubeko kunye nobugcisa basekhaya.Ukwazisa ngeminyhadala yobugcisa kwiwadi, ulwazi lomboniso kunye nezixhobo ezikwiigalari zabucala, ulwazi ngemisebenzi yobugcisa yabemi bewadi, nokwaziswa kwamanani enkcubeko anxulumene newadi.Njengezinto zokufunda ezijolise kwiinkcukacha ezahlukeneyo zenkcubeko kunye nezobugcisa ewadini, iyakusasazwa simahla kwiwadi yonke ngokufaka amaphephandaba.
Ukukhangela izicelo zodliwanondlebe kunye nokunikezelwa kolwazi!
Kwiphepha lolwazi "i-ART bee HIVE", intatheli yewadi "Mitsubachi Corps" iya kugubungela imisebenzi yenkcubeko kunye nezobugcisa!Nceda usithumelele izicelo zokugubungela okanye ulwazi ngemisebenzi enxulumene nenkcubeko kunye nezobugcisa, ezinje ngeminyhadala yobugcisa, imisebenzi yokunyusa ubugcisa, kunye neendawo zobugcisa.
* Ukupapashwa kuya kugqitywa emva kwentlanganiso yokuhlela.Kuxhomekeke kumxholo kunye nendawo, sisenokungakwazi ukupapasha.Nceda qaphela.
Imisebenzi yemibutho yenkcubeko kunye nezobugcisa kunye nabantu abazinze kwiOta Ward nakwiidolophana zeOta Ward
Imisebenzi yenkcubeko kunye nezobugcisa apho abafundi bahlala, basebenza, kwaye befunda kwiOta Ward
That Imisebenzi engaweli kumgangatho wopapasho
1. XNUMX.Ifomu ezinikezelweyo kwiphepha lasekhaya
2. ifeksi (03-3750-1150)
3. XNUMX.I-Ota Citizen's Plaza, iOta Citizen's Hall Aplico, Ota Bunkanomori Kwiwindow nganye
Xa ungenisa ngefeksi okanye kwifestile nganye, nceda ugcwalise izinto ezifunekayo kwifomu yodliwanondlebe / kwifom yokubonelela ngolwazi kwaye uyingenise.
Ifomu ezinikezelweyo kwiphepha lasekhaya
Isicelo sokufunda / ifom yokubonelela ngolwazi
Ukuba kusebenza oku kulandelayo, ayinakuthunyelwa.
(1) Izinto ezinokuthi zonakalise imeko yoluntu kunye nesidima sombutho
(2) Ipolitiki, imisebenzi yenkolo, izimvo kunye nokuzinyusa
(3) Nantoni na echasene noluntu kunye nokuziphatha okuhle kunye namasiko
(4) Amashishini aphantsi koMthetho woLawulo lweShishini leMpahla, njlnjl. NoKwenziwa koShishino (uMthetho Nombolo 23 kaJulayi 7, 10)
(5) Izinto ezingavunyelwanga ngumthetho okanye ezinokwaphula umthetho
(6) Abanye banakanwa njengengxaki ethile kuluntu
Cofa apha ukuze ufumane ifom yokufaka malunga nesicelo / ukubonelelwa